my: changeset 426:f48bda4f3d201a075774b16f36d0b8ac2dfe0a94
Mercurial > releases > l10n > mozilla-aurora > my / changeset / f48bda4f3d201a075774b16f36d0b8ac2dfe0a94
Pontoon: Update Burmese (my) localization of Firefox Aurora
Sat, 08 Apr 2017 16:00:33 +0000
changeset 426 f48bda4f3d201a075774b16f36d0b8ac2dfe0a94
parent 425 587036c8b1c361ed91c8e06a32b977baca04bb71
child 427 bca0df633dd3d23e737594c942095682fe933ee7
push id 397
push date Sat, 08 Apr 2017 16:00:37 +0000
Pontoon: Update Burmese (my) localization of Firefox Aurora Localization authors: - La Min Ko (လမင်းကို) <lminko.lmk@gmail.com>
@@ -445,17 +445,17 @@ identity.identified.state_and_country=%S
trackingProtection.intro.title=ခြေရာခံ ကာကွယ်မှု အလုပ်လုပ်ပုံ
trackingProtection.intro.description2=သင် ဒိုင်းကို မြင်ရလျှင် %S သည် သင့်လှုပ်ရှားမှုကို နောက်ယောင်ခံနိုင်သည့် ဝဘ်စာမျက်နှာ၏ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကို ပိတ်ပင်ထားသည်။
-trackingProtection.intro.step1of3=၃ ၏ ၁
+trackingProtection.intro.step1of3=အဆင့် ၃ ဆင့်မှ အဆင့် ၁
trackingProtection.icon.activeTooltip=ခြေရာခံရန် ကြိုးစားမှု တားဆီးထားသည်
editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=ဒီစာမျက်နှာကို %S သည် အမြဲတမ်း မှတ်ထားပါလိမ့်မည်။
@@ -465,21 +465,21 @@ editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=ဒီစာမှတ်ကို ပြင်ရန်
editBookmark.removeBookmarks.label=မှတ်သားချက်အားဖယ်ပါ;မှတ်သားချက်#1 အား ဖယ်ပါ။
+puNotifyText=%S ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပြီ
+puAlertTitle=%S ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပြီ
@@ -534,21 +534,21 @@ safeModeRestartButton=ပြန်လည်စတင်မည်။
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
dataReportingNotification.message       = %1$S သည် %2$S သို့အချို့အချက်အလက်များအား အလိုအလျောက်ပေးပို့ပြီးသင်၏ အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ပေးပါလိမ့်မည်
-dataReportingNotification.button.label  = Cသင်ဘာမျှဝေမည်ကိုရွေးပါ
+dataReportingNotification.button.label  = မျှဝေနိုင်သည်များကို ရွေးပါ
# Process hang reporter
processHang.label = ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုသည် သင့်ဘရောင်ဇာကို နှေးကွေးစေပါသည်။ သင်ဘာလုပ်ချင်ပါသလဲ။
processHang.button_stop.label = ရပ်ဆိုင်းပါ
processHang.button_stop.accessKey = S
processHang.button_wait.label = စောင့်ဆိုင်းပါ
@@ -562,19 +562,19 @@ service.toolbarbutton.label=ဝန်ဆောင်မှုများ
service.install.description=သင်၏ %2$S ဘားနှင့် ဘေးတန်းများတွင် အသုံးပြုရန် %1$S မှ ဝန်ဆောင်မှူများအား အသုံးပြုမည်လား ?
+social.markpageMenu.label=စာမျက်နှာကို %S တွင် သိမ်းပါ
+social.marklinkMenu.label=လင့်ခ်ကို %S တွင် သိမ်းပါ
social.error.message=%1$S ဟာ အခုလောလောဆယ် %2$S နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
@@ -602,21 +602,21 @@ getUserMedia.shareAudioCapture2.message = ယခုတပ်ဗ်၏ အသံကို နားထောင်ရန် %S ကို ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါမည်လား။
getUserMedia.shareScreenWarning.message = သင်ယုံကြည်ရသော ဆိုက်များနှင့်သာ စကရင်များကို မျှဝေအသုံးပြုပါ။ မျှဝေခြင်းသည် ဆိုက်အတုများကို သင်အနေနှင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေသည့်အပြင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုလည်း ခိုးယူစေနိုင်သည်။ %S
getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = သင်ယုံကြည်ရသော ဆိုက်များနှင့်သာ %1$S ကို မျှဝေအသုံးပြုပါ။ မျှဝေခြင်းသည် ဆိုက်အတုများကို သင်အနေနှင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေသည့်အပြင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုလည်း ခိုးယူစေနိုင်သည်။ %2$S
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = ပိုမိုလေ့လာရန်
getUserMedia.noApplication.label = မည်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းမျှ မရှိပါ
getUserMedia.noScreen.label = မည်သည့် မျက်နှာပြင်မျှ မရှိပါ
getUserMedia.noWindow.label = မည်သည့် ဝင်းဒိုးမျှ မရှိပါ
getUserMedia.shareEntireScreen.label = မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး
@@ -734,19 +734,19 @@ slowStartup.disableNotificationButton.ac
flashHang.message = %S သည် စွမ်းရည် တိုးမြှင့်ရန် Adobe Flash ၏ အပြင်အဆင်တချို့ကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
flashHang.helpButton.label = ပိုမိုလေ့လာရန်…
-customizeTips.tip0 = %1$S: You can customize %2$S to work the way you do. Simply drag any of the above to the menu or toolbar. %3$S about customizing %2$S.
+customizeTips.tip0 = %1$S။ သင်သည် %2$S ကို စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အထက်တွင် ရှိသော မည်သည့်အရာကိုမဆို မီနူး သို့မဟုတ် တန်ဆာပလာဘားထဲသို့ ဖိဆွဲပြီး ထည့်နိုင်သည်။ %3$S စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း အကြောင်း %2$S.
customizeTips.tip0.hint = နမူနာ
-customizeTips.tip0.learnMore = ဆက်လေ့လာ
+customizeTips.tip0.learnMore = ပိုမိုလေ့လာရန်
customizeMode.tabTitle = %S ကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်
@@ -763,18 +763,18 @@ readingList.promo.firstUse.readerView.body = အရှုပ်အပွများကို ဖယ်ရှားပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်ဖတ်ချင်သည့် အကြောင်းအရာပေါ် အာရုံစိုက်နိုင်ပါမည်။
# LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.mobilePromo.text2):
appMenuRemoteTabs.mobilePromo.text2 = %1$S သို့မဟုတ် %2$S ကို ဆွဲယူပြီး သင့်မီးမြေခွေးအကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
-appMenuRemoteTabs.mobilePromo.android = Android အတွက် မီးမြေခွေး
-appMenuRemoteTabs.mobilePromo.ios = iOS အတွက် မီးမြေခွေး
+appMenuRemoteTabs.mobilePromo.android = Android အတွက် Firefox
+appMenuRemoteTabs.mobilePromo.ios = iOS အတွက် Firefox
# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.mainMessage,
# These strings are related to the messages we display to offer e10s (Multi-process) to users
# on the pre-release channels. They won't be used in release but they will likely be used in
# beta starting from version 41, so it's still useful to have these strings properly localized.
<!ENTITY  general.label                 "အထွေထွေ">
-<!ENTITY  warnOnAddonInstall.label        "ဆိုက်များမှ အက်အွန်များသွင်းလိုပါက သတိပေးပါ">
+<!ENTITY  warnOnAddonInstall.label        "ဝဘ်ဆိုက်များက အတ်အွန်များ တပ်ဆင်လိုသည့်အခါ သတိပေးပါ">
<!ENTITY  warnOnAddonInstall.accesskey    "W">
<!ENTITY  enableSafeBrowsing.label        "အန္တရာယ်ရှိသည့် အကြောင်းအရာတုများကို တားဆီးပါ">
<!ENTITY  enableSafeBrowsing.accesskey    "B">
<!ENTITY  blockDownloads.label            "အန္တရာယ်ရှိသည့် ဆွဲယူထားသည့်ဖိုင်များကို တားဆီးပါ">
<!ENTITY  blockDownloads.accesskey        "d">
-<!ENTITY  blockUncommonAndUnwanted.label     "မလိုချင်သော ဆော့ဝဲများအား အကြောင်းသတိပေးပါ">
+<!ENTITY  blockUncommonAndUnwanted.label     "မလိုအပ်သော၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ တွေ့ရှိပါက သတိပေးပါ">
<!ENTITY  blockUncommonAndUnwanted.accesskey "C">
-<!ENTITY  addonExceptions.label         "Eခြွင်းချက်များ...">
+<!ENTITY  addonExceptions.label         "ခြွင်းချက်များ...">
<!ENTITY  logins.label                  "ဝင်ရောက်မှု အချက်အလက်များ">
<!ENTITY  rememberLogins.label          "ဆိုက်များအတွက် ဝင်ရောက်မှုအချက်အလက်ကို မှတ်ထားပါ R">
<!ENTITY  rememberLogins.accesskey      "R">
-<!ENTITY  passwordExceptions.label      "x ခြွင်းချက်များ...">
+<!ENTITY  passwordExceptions.label      "ခြွင်းချက်များ...">
<!ENTITY  passwordExceptions.accesskey  "x">
-<!ENTITY  useMasterPassword.label        "U ပင်မ စကားဝှက်တခု သုံးစွဲပါ။">
+<!ENTITY  useMasterPassword.label        "အဓိကစကားဝှက်တစ်ခု အသုံးပြုပါ">
<!ENTITY  useMasterPassword.accesskey    "U">
-<!ENTITY  changeMasterPassword.label     "M ပင်မ စကားဝှက် ‌ပြောင်းပါ...">
+<!ENTITY  changeMasterPassword.label     "အဓိကစကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲရန်…">
<!ENTITY  changeMasterPassword.accesskey "M">
-<!ENTITY  savedLogins.label              "သိမ်းထားသည့် ဝင်ရောက်မှု အချက်အလက်များ L …">
+<!ENTITY  savedLogins.label              "သိမ်းထားသည့် ဝင်ရောက်မှု အချက်အလက်များ…">
<!ENTITY  savedLogins.accesskey          "L">